वीरगञ्जमा सैलुन र पार्लर व्यवसायीकाे प्रदर्शन - Latest Nepali News
वीरगञ्जमा सैलुन र पार्लर व्यवसायीकाे प्रदर्शन
जुन 28, 2020 जुन 28, 2020 Bishwa Ghatana0Comments
१४ असार २०७७ वीरगञ्ज : वीरगञ्ज–५ रेशमकोठीका धीरेन्द्र ठाकुरले कोठा भाडामा लिएर सैलुन खोलेका छन् । मासिक ३५ हजार भाडा लाग्ने सैलुन लकडाउनका कारण तीन महिनादेखि बन्द छ । साहुले भाडा मागिरहेका छन् ।
‘साहुले भाडा चाँडै दिनुस् भनिरहेका छन्, कारोबार शून्य छ । बचेको थोरै पैसा पनि लकडाउनमा सकियो । अब म कहाँबाट पैसा ल्याएर दिउँ ?
उनको जस्तै पीडामा छन्, वीरगञ्ज–७ रामटोलका चन्दन ठाकुर । उनको माईस्थान मन्दिर पछाडि सैलुन छ । ‘सैलुन भाडा त मासिक १० हजार हो, साहुले मागिरहेका छन् । तर कसरी तिर्न सक्नु,’ उनले भने, ‘बैंकबाट लिएको ऋणको किस्ता तिर्न पनि तोकता गरिरहेका छन् । जसरी पनि लेउ भन्छन् । पैसा नै छैन कसरी दिने ? ’
वीरगञ्जमा ५ सयको हाराहारीमा सैलुन छन् । लकडाउनले गर्दा तीन महिनादेखि बन्द छ । सैलुन खोलिएको घरका घरबेटीले भाडा माग्न थालेका छन् । केही दिनयता वीरगञ्जमा अन्य पसलहरु खुल्न थालेका छन् । तर सैलुन र व्युटीपार्लर खोल्न दिइएको छैन । वीरगञ्जमा ३ सयको हाराहारीमा व्युटिपार्लर सञ्चालनमा छन् । लकडाउन अघि विभिन्न स्थानमा व्युटिसियन सम्बन्धी तालिम पनि सञ्चालनमा थिए ।
नेपाल व्युटिसियन संघ पर्साका अध्यक्ष उर्मिला थापा पार्लर खोल्न नपाउँदा भाडा तिर्न मात्रै नभएर घर व्यवहार धान्न मात्रै समस्या हुन थालेको बताउँछिन् । ‘कसैको घरबेटीले पूरै भाडा मागेका छन्, कसैले अलि–अलि गरेर दिनु भनेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले भाडा छुट गर्न भनेको छ नि भन्दा सरकारले आएर घर चलाइदिन्छन रे ? भन्ने जवाफ दिन्छन् ।’
उनका अनुसार लकडाउनले एक रुपैयाँ पनि आम्दानी नभएको अवस्थामा भाडा दिन सक्ने स्थिति छैन ।
सैलुन र पार्लर खोल्न देउ भन्दै प्रदर्शन
व्युटिसियसन संघमा २ सय ६० जना सदस्य छन् । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेससँग आवद्ध नेपाल नाई संघ पर्सा र व्यटिसियन संघ पर्सा मिलेर आइतबार वीरगञ्जमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । वीरगञ्जको घण्टाघरमा सैलुन र पार्लर खोल्न पाउनुपर्ने माग राखेर उनीहरुले लकडाउनको भाडा मिनाहा गरियोस्, तत्काल राहत प्याकेजको घोषणा गरियोस्, बैङ्कबाट लिएको ऋणको ब्याज मिनाहा गरियोस्, निशुल्क कोरोना जाँचको व्यवस्था गरियोस् लगयतका नारा लेखिएको प्ले कार्डसहित प्रदर्शन गरेका हुन् ।
नाई संघ पर्साका उपाध्यक्ष चीरञ्जीवी ठाकुरले सैलुन र पार्लर खोल्न पाउनुपर्छ भनेर प्रदर्शन गरिएको बताए । ‘कोरोनाको डर हामीलाई नभएको हैन, बालबच्चा परिवार हाम्रा पनि छन् । न राहत पाएको छ न भाडामा छुट नै,’ ठाकुरले भने, ‘तीन महिनासम्म त सहेर बसेकै हो, अब कति सहने ? आम्दानी नहुँदा दैनिक गुजारा गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।’
संघका अध्यक्ष नीसार अहमदले स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाएर सैलुन र पार्लर खोल्न पाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
नेपाल सरकार मन्त्री परिषद बैठकले जेठ २८ गते लकडाउन खुकुलो गर्दै खोल्न पाउने र नपाउने व्यवसायहरुको सूची जारी गरेको थियो । सैलुन र पार्लर खोल्न नपाउनेमा परेको छ । त्यसपछि सरकारले अर्को सूचना जारी गरेको छैन ।
पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतले सरकारले अर्को निर्णय नगरेसम्म सैलुन र पार्लर खोल्न नपाइने बताउँछन् । ‘सरकारले सैलुन व्युटिपार्लर खोल्न नपाउने व्यवसायमा राखेको छ । जिल्लालाई निर्णय गर्न सक्ने अधिकार दिएको छैन,’ उनले भने, ‘अर्को निर्णय नआएसम्मका लागि त्यहL पालना गर्नुको विकल्प छैन ।’
आवश्यक सावधानी अपनाएर सैलुन खोल्न पाउनुपर्ने माग गर्दै नाई संघले इलाका प्रशासन कार्यालय सिमरामा ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
संघको जीतपुरसिमरा नगर कार्यसमितिले इलाका प्रशासन प्रमुख लक्ष्मण ढकाललाई ज्ञपनपत्र बुझाइएको हो । लकडाउनका कारण व्यवसाय बन्द हुँदा नाई श्रमिकहरुमा उत्पन्न समस्याको समाधान गरिदिन संघले ज्ञापनपत्र मार्फत आग्रह गरेको छ ।
नगर कार्यसमिति अध्यक्ष दिपक ठाकुरद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा नाई श्रमिकहरुलाई सरकारले अनिवार्य मास्क, सेनिटाइजर लगायत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराई सैलुन सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइदिन माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी नाई श्रमिकहरुलाई लकडाउन अवधिको कोठा र पसल भाडा छुट, बैङ्क तथा सहकारीहरुबाट लिएको ऋणको ब्याज छुट, निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा र राहतको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने माग उनीहरुको छ । माग सम्बोधन नभए स्वेक्षिक रुपमा सैलुन सञ्चालन गर्ने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन् ।
← कैलालीको धनगढीबाट विप्लव समूहका ६ जना पक्राउ
Trump Denies Briefing On Reported Bounties Against US Troops →